Izindaba - I-ATM 2021: I-NH Dubai the Palm izovulwa kulo nyaka
Umshini wokomisa izinwele
I-Electronic Password Safes
I-Iron Board noMphathi
I-ATM 2021: NH Dubai the Palm izovulwa kulo nyaka
Amahhotela eNH azoqala eMiddle East ngokuhamba kwesikhathi kulo nyaka ngokwethulwa kweNH Dubai the Palm.
Njengamanje ezigabeni zokugcina zentuthuko, impahla entsha eyakhiwayo engama-533 izovula iminyango yayo ngoDisemba.
Kutholakala ePalm Jumeirah yaseDubai, indawo eyingqophamlando, iNH Dubai iPalm izoba yingxenye ye-Seven Hotel & Apartments, intuthuko yokusetshenziswa okuxubekile equkethe umbhoshongo wokungenisa izihambi nombhoshongo wokuhlala.
Ihhotela lizotholakala kalula esiqwini esikhulu sePalm, esiseduze nenxanxathela yezitolo enkulu ePalm futhi eduze nasePalm Fountain ePointe, esungulwe muva nje njengomthombo omkhulu kunayo yonke emhlabeni.
Ezinye izivakashi ezibalulekile zaseDubai ezibandakanya iBurj Khalifa, iDubai Mall kanye neDubai Marina konke kungafinyeleleka kalula.
Isakhiwo esisha esinezitezi eziyi-14 sizohlinzeka ngamagumbi ezivakashi angamahhotela angama-227 namasudi, ngaphezu kwamafulethi asetshenziswayo angama-306.
Izinsiza zizofaka izindawo zokudlela eziningi nemigoqo, amakamelo amathathu e-spa, iklabhu lezingane namakamelo amane okuhlangana.
Kwabasebenzayo, kuzoba nendawo yokuzivocavoca ehlome ngokuphelele ngemishini yakamuva.
Ngaphezu kwalokho, ihhotela lizoba nekhaya lesiziba esophahleni lwendawo engapheli, okudala indawo ekahle 'ye-Insta'.
Izakhiwo zangaphakathi zehhotela zizoba nesibindi, ezangempela futhi zibe nomfutho, zilethe ukuqhuma kombala kanye nenqwaba yezinhlamvu zasendaweni ezibonisa ukushaya kwedolobha elinamandla laseDubai.
I-NH Dubai The Palm izokwethula izindawo ezintsha ezishisayo ePalm, kufaka phakathi ibha yezemidlalo ephilayo, kanye nebha ephahleni enesitayela nendawo yokuphumula eceleni kwechibi elingapheli, entshonalanga yonke ibheke futhi ilungele ukujabulela ukushona kwelanga okudumile kwedolobha.
Esinye isici esibalulekile sehhotela kuzoba indawo enkulu enezinhloso eziningi yokusebenza ngokubambisana kanye nokufinyelela ejimini nasemashaweni, ekahle kulabo abadinga ukuphuma sekwedlule isikhathi.
Isikhathi Iposi: Jun-01-2021
Langaphambilini I-Atlantis, iPalm yethula izinsiza ezintsha zabalingani bezohwebo
Olandelayo: Ungayenza Kanjani Ikhofi Usebenzisa I-Powder Yekhofi Kumshini Wakho Wekhofi we-AOLGA AC-514K
Igumbi 1003, 10 / F, Tower 1, Lippo Center, 89 Queens way, Admiralty, Hong Kong
Thola Amanani aningiliziwe